AVIAVY & AMONTANA Family Tree, Madagascar
ANDRIANAMBONIMENA , ZANAKANDRIANA MPANDOVA NY FANJAKAN'ANDRIAMASINAVALONA
Avy tamin'i Raharison
Raha misy fanitsiana tianao hatao, dia adikao ity, itsio ary alefaso aviavy@ymail.com
Ny hafatr'Andriamasinavalona : "Andrianambonimena, zanak'anabaviko no tompon'ny (fanjakana) farany"
Niady Andrianjakanavalomandimby sy Andrianambonimena : resy Andrianambonimena
Tsy narahan’ Andrianjakanavalomandimby sy Andriantomponimerina ny hafatr’ Andriamasinavalona rainy
Te-hanaraka ny hafatr'Andriamasinavalona kosa Andriantsimitoviaminandriana , mpanjakan’Ambohimanga
Saingy tsy ny zanak'Andrianambonimena no notendreny fa ny zanaky Rangorinimerina
Fony Andriamasinavalona nanjaka dia nanan-janaka lahy maro izy. Tamin'izay zanany maro izay dia nisafidianany ireo zanany ireo hanjaka :
 Andrianjakanavalomandimby teto Antananarivo sy Merinatsimo,
 Andriantsimitoviaminandriana (Andriantsimitoviaminandriandrazaka ) teo Ambohimanga sy Avaradrano,
 Andrianavalonimerina teny Ambohidrabiby sy Mandiavato
 ary Andriantomponimerina teo Ambohidratrimo sy Marovatana.
Izao tsara ny tenin’Andriamasinavalona tamin'izany hoe "Indreo ianareo efadahy : ianareo no ametrahako ny fanjakana. Fa indro kosa Andrianambonimena zanak'anabaviko : zanakareo efa-dahy io ary izy no ho tompon'ny fanjakanareo efa-dahy amin'ny farany".
Izany hoe latsa-danja izany izy efa-dahy raha miohatra amin'Andrianambonimena raha tena dinihintsika tsara satria izy efatra mirahalahy tsy misy mahazo mamindra ny fanjakana amin'ny zanany naterany fa tsy maintsy Andrianambonimena kosa no mandray ny fanjakana. Niavaka izany Andrianambonimena tamin' izay satria izy no "Zanakandriana mpandova ny fanjakan'Andriamasinavalona ".
Ny tenin'Andriamasinavalona dia tsy azo ovana fa ny terak'Andrianambonimena ihany no ho tompon’ny farany.
Nisy ady teo amin'Andrianjakanavalomandimby sy Andrianambonimena satria nolazain’itsy voalohany fa tsy nahandry tantana Andrianambonimena ka nioko sy nitady handrombaka fanjakana alohan’ny fotoana. Niady izy mianaka.
Ny bokin-dRaombana dia milaza fa rehefa niady izy mirahalahy mianaka ireo dia resy tosik' Andrianjakanavalomandimby Andrianambonimena . Vokatr'izay fahareseny tosika izay angamba mba hamonjeny ny ainy dia nanoa Andrianambonimena , ary dia nofoanan’ Andrianjakanavalomandimby ny fandovam-panjakana ho an’ Andrianambonimena .
Very fanjakana saika ho lovana Andrianambonimena ka dia nionona tamin’ny vodivonany teny Alasora ary ny zanany dia tsy noheverina intsony hoe Zanakandriana fa Andriamasinavalona . Lasa Andriamasinavalona Andrianambonimena no niafarany.
Niteraka telo Andrianambonimena :
 Andrianavalonarivo , milevina eny Ambohitrandriamanitra, atsinan'Ambohijanaka, izay niteraka an'Andrianavalomanitsadahy sy Andriandahimbolamena ; ireo no razamben'ny Andriana eny Ambohijanaka;
 Ranavalomboahangy ;
 Andriantsiorivahoaka .
Rehefa resy Andrianambonimena , dia tsy nandraharaha ny tenin'Andriamasinavalona rainy intsony ny zanany sasany tamin’izy efa-dahy fa samy may te-hampanjaka ny tranany, Ikaky rahateo koa (angamba) efa niamboho tamin'ny fotoana namindrana ny fanjakana.
Andrianjakanavalomandimby namindra ny fanjakany tamin'Andriampoinimerina zanany tamin'Imerinatsimo iray manontolo.
Andriantomponimerina teny Marovatana namindra ny fanjakany tamin'i Ratrimonibemihisatra zanany.
Andriantsimitoviaminandriana dia nanjaka teny Ambohimanga, Ambohidrabiby moa efa voatelin'Avaradrano tamin'izay fotoana izay ka telo toko sisa ny fanjakana lehibe napetrak'Andriamasinavalona : Imerina atsimo iray manontolo, Marovatana ary Avaradrano izay nitelina an'I Mandiavato izany dia Ambohidrabiby.
Andriantsimitoviaminandriana dia tsy nampanjaka an-dRafondrazaka zanany lahy fa te-hanatanteraka kosa ny hafa-drainy. Ravololondralambo , vadibeny izay isan’ny zanak’anabavin’Andriamasinavalona tena tiany kanefa tsy niteraka, dia nanitrikitrika fa ny natera-dRangorinimerina ihany no ekeny ho zanaka azo hatsangana. Ny finoan’izy ireo dia tsy hisy hahavory an’Imerina ho iray mihitsy raha tsy avy amin’ny mpianakavin’Andrianambonimena izay hany tsara tso-drano tamin’Andrimasinavalona ho tompon’ny farany.
Takatr' Andriantsimitoviaminandriana tsara fa tsy mahazo ilay hasina napetrak' Andriamasinavalona raha tsy avy amin'ny fianakavian'Andrianambonimena . Tsy nomeny ny zanany lahy izay nantsoina hoe Rafondrazaka fa nandeha izy nitady tamin'ny fianakavian'Andrianambonimena . Hoy Andriantsimitoviaminandriana hoe "Andeha aho hisavasava amin'ny fianakavian' Andrianambonimena . Raha toa ka nanoa izy ka Andriamasinavalona ny taranany, izaho mino fa mbola manana irai-tampo mitondra ny hasin'ny fari-bavan'ikaky (Andrimasinavalona) izy, indrindra moa ka anabavy". Hoy tokoa mantsy Andrimasinavalona rainy: “zanak'anabaviko no handray ny fanjakana satria mandray hasina ny anabavy”.
Nampitadiavin’Andriantsimitoviaminandriana ny zanak'anabavin'Andrianambonimena , dia ny zanaky Rangorinimerina izany. Tamin'izay fotoana izay dia nipetraka teny Androhibe eny ankilan'Antsahadinta Rangorinimerina satria Andriamifonozozoro vadiny dia teraky ry zareo eny Ivatobe sy Androhibe Antsahadinta, izany hoe avy amin’ny tera-dRavololondrenitrimo sy Andriandambozozoro mbamin-dry Andrianjakatrimo.
Nalain'Andriatsimitoviaminandriana daholo ny zanakalahin-dRangorinimerina . Dimy lahy sy valo vavy no natera-dRangorinimerina dia ireto avy :
1.- Andriamohara, nandova fanjakana ny anadahin-dreniny dia Andrianambonimena izay teny Alasora. Niteraka telo lahy sy iray vavy izy izay niparitaka teny Ambohijoky, Antsahadinta, Fenoarivo, Ambatomanga, Ambohipaniry, sns...
2.- Rakotomavo Andriambelomasina, mpanjakan’ Ambohimanga. Izy no loharano nipoiran’ny Zanakandriana sy Zazamarolahin’Ambohimanga izay niparitaka ihany koa. Isan’ireny ny naterak’Andrianampoinimerina.
3.- Andriantoarano raiben’i Andrianaivoramahazo zazamarolahy mapanao mari-trano, manan-taranaka eny Alasora, Ambohimanga sy Miarinarivo Ambohipananina, sns,…
4.- Ramisamanjaka tompom-bodivona teny Anosiarivo, nisy zanany koa eny Antanamalaza sy Ifandàna.
5.- Andriampalimanana sy ny terany eny Tsirangaina amin’Ambodirano sy Ambohidrangory.
Rehefa tonga teny Ambohimanga ny zanaka dimy lahin-dRagorinimerina dia hoy Andriantsimitoviaminandriana hoe " Tsy sanatria akory izahay hangala-jaza fa haka zaza hampanjakaina".
Natsangany ho zanany izy dimy mirahalahy ireo ary nisafidy anankiray izy hitondra ny fanjakana. Voafidy tamin'izany ny zanaka lahiaivon-dRangorinimerina atao hoe Rakotomavo (Andriambelomasina).
 Valo lahy moa no voatonon'ny tantara raha ny : “Tantara Ny Andriana” n’ny Rev Père Callet no jerena